220㎡ Jaranjarada Shanta Qol ee Hoose, Qaabka Casriga ah ee Casriga ah | Naqshadeynta Shirkadda Hongfu
Bogga ugu weyn / blog / 220㎡ Jaranjarada Shanta Qol ee Hoose, Qaabka Casriga ah | Naqshadeynta Shirkadda Hongfu
2021 / 05 / 28 Qoondayntablog 3206 0
Xiaoge Isbahaysiga Naqshadeynta Gudaha
“Sababta ugu weyn ee aan uga guuray buuqii iyo mashquulkii magaalada una aadnay meel jawi wanaagsan leh waxay ahayd danta labadeena caruur. Hadda waxaan ku leenahay beer ku taal hore iyo gadaal gurigeenna, iyo maalmaha ciidaha qoraxdu jirto, qoyska oo dhan ayaa aadaya lugayn iyo wada ciyaar beerta u dhow. Ku noolaanshaha jawi aan dareemi karno xilliyada isbaddelaya waa barako weyn. Waxaan nahay dad xor ah, oo doorbida xarrago iyo sharaf, iyo sidoo kale fudeyd iyo baqdin, oo maalmaha qiimeeya diirimaad iyo iftiin. ”
Annaga oo tixgelinayna in villa madaxbanaan ay inta badan la il daran yihiin iftiin la'aan iyo mugdi iyo qoyaan ka dhashay hawo la'aan iyo hawo la'aan guriga, waxaan baranay oo dib u cusbooneysiinay dhibaatooyinkaas aan kor ku soo xusnay bilowgii soo galitaanka. Waxaa jira laba dabaq oo ka sarreeya iyo ka hooseeya, dabaqa koowaad waa aagga isdhexgalka dadweynaha, beerta, hoolka laga soo galo, qolka fadhiga oo hoos u boodaya, qolka cuntada iyo jikada. Isticmaalka booska cad, maaddada marmar dabiiciga ah iyo soo bandhigida muuqaalka aan qurxin ayaa ka dhigeysa meesha bannaan, dhalaalka woqooyi-koonfur mid hufan oo hodan ku ah farshaxan fara badan. Qaab-dhismeedka wuxuu ka kooban yahay alaab guri oo hooseeya sida ugu macquulsan, ballaca booska waxaa ku dhegan nalalka iyo qalabka jilicsan ee dhererkoodu kala duwan yahay. Dabaqa labaad waa shaqo gaar ah iyo meel nasasho, boos walbana dib ayaa loo dhisay loona qorsheeyay inuu soo bandhigo qaab shaqsiyeed oo ka duwan kii hore.
Marka xaasku ku soo noqoto guriga ka dib markay carruurta ka soo kaxeyso dugsiga, waxaa bilaabmaya waqtiga farxadda qoyska. Sheekooyin cusub iyo xusuus hore ayaa sii wadaya inay is dhex galaan, si tartiib tartiib ah u noqdaan xusuusihii wanaagsanaa ee qoyska.
Booska boodka hoose wuxuu ku bilaabmayaa qaab iyo dhisme joomatari. Ka dib markii la beddelo jihada jaranjarada, gidaarka waxaa looga tagayaa mid cad oo ku yaal aag ballaaran si muuqaal ahaan loo ballaariyo dareenka booska. Darbiga TV-ga waxaa loo qaabeeyey qaab qaab qalooca, meel fog iyo dhowna, derbiga qalooca wuxuu beddelayaa qadka toosan ee waxqabadka iyo aragtida jawiga ee bannaan ee gudaha ka dib marka dadka deggan ay galaan. Marka daahyada la jeexjeexo, daaqadaha sagxad ilaa-saqafka oo saafi ah oo hufan ayaa soo bandhigaya cagaarka bannaanka illaa ugu badnaan, halkaas oo nolol maalmeed xarrago iyo cibaado leh ka muuqato.
Marka lagu daro waqtiga waalidka-ilmaha ee carruurta, waqtiga laba qof sidoo kale waa mid aad muhiim u ah. Hadalka, daawashada filimada, qurxinta guriga. Ilaa iyo inta labadiinnu wada joogaan, marwalba waxaa jira dareen lama filaan ah oo wada noolaansho ah.
Iyadoo la tixgelinayo in carruurtu ay waqti badan ku qaadan doonaan inay ku ciyaaraan qolka fadhiga inta lagu jiro xilliga nasashada, waxaan doorannaa alaab guri oo ammaan ah oo aad u ammaan badan si ay u sameeyaan qaabeynta booska. Lammaanaha ayaa beddeli doona walxaha qurxinta ee booska ku yaal iyadoo loo eegayo niyadda ay ku sugan yihiin, isla markaana dhinaca ku xigta fadhiga fadhiga waxaa loo isticmaalaa in lagu qabto khamri. Ku raaxeysiga iyo nasashada ayaa ah dabeecad dhaqameedkooda nolosha.
Jebinta caajisnimada ee minimalism-ka sida caadiga ah keenta, adeegsiga khadadka nadiifka ah, jilayaasha toosan ee firfircoon, iyo qolka hurdada ee farshaxanka gadaal ayaa ka wada shaqeeya si loo abuuro jawi casri ah oo casri ah.
Waqti u qaado inaad la quraacato carruurtaada ka dibna u qaado dugsiga. Markaad guriga timaaddo, in yar daryeelo dhirta beerta. Tani waa waqti nasasho oo madadaalo ka buuxo.
Balakoonka fadhiga waxaa lagu daraa jikada si loo balaariyo isticmaalka. Bidixda iyo midigta waxaa ku yaal 5210mm iyo 2723mm aagagga golaha wasakhda, oo leh awood ballaaran oo wax lagu kaydiyo si jikada u ahaato mid nadiif ah oo hagaagsan markasta. Ugu dambeyntiina, aag balakoon ah oo deggan 9.3m² ayaa laga dhisay xagga dambe. Waxaa loo kala qaadaa albaabbada wareegaya ee muraayadaha, oo siiya iftiin aad u fiican meelaha wareegga.
Qolka jiifka labaad ee dabaqa koowaad waa meel kumeelgaar ah oo loogu talagalay qoyska iyo asxaabta, wuxuuna kudhow yahay beerta laga soo galo, oo leh iftiin dabiici ah oo fara badan. Ugu horreyntii, midabada dhalaalaya ee cad iyo kuwa jilicsan ayaa abuuraya jawi raaxo leh oo diirran, ka dibna ku dar rinjiyeynta derbiga casaanka ah si ay uga dhigto goobta guud ahaan qaab farshaxan casri ah.
Jaranjarooyinka waxaa laga sameeyay muraayad iyo marmar, midabka dabiiciga ahna waxaa lagu lammaaneeyay sawirka derbiga buluugga ah ee Mykonos oo ay sameysay marwada reerku, kaas oo heshiisiinaya ragannimada iyo dheddigga oo kaa dhigaya mid jacayl iyo qoto dheer leh.
Goobta daraasadda waxaa loo dhisay si loo ballaariyo guud ahaan aagga 10m² ilaa 20.4m², oo leh laba daaqad oo u eg L-qaab-daaqad-saqaf ah si bannaanku u noqdo mid cad oo dhalaalaya. Dusha sare waxaa lagu rinjiyeeyay Delft buluug, oo muuqaal ahaan daciifinaya alwaaxyada qaabeeya ee dhismaha.
Sidoo kale waa goob ay ka wada shaqeeyaan qoyska afarta dabaq labaad ah, oo leh meel ku filan oo haweeneyda iska leh ay ku weheliso labadeeda carruur shaqadooda guriga iyo waxbarashadooda. Albaabka laga soo galo waxaa loogu talagalay inuu yahay goob daaha laga fiiriyo oo fadhiga raaxada leh la dhigo.
Aaggii asalka ahaa ee terrace-ka waxaa lagu soo daray qolka jiifka sare si loogu wada isticmaalo. Daaqadaha ayaa loo beddelay daaqado dabaqa-ilaa-saqaf buuxa ah si loo sii daayo iftiin badan. Gogosha alwaaxa iyo dhammeystirku waxay qaataan door xoog leh, iyagoo soo saaraya dabeecad dabiici ah oo la safeeyey. Midabada midabada leh ee xarrago leh iyo kuwa miisaanka leh ayaa ka ilaaliya dhibaatooyinka iyo jahwareerka.
Marka lagu daro abuurista jawi raaxo leh oo raaxo leh, qolka jiifka ayaa sidoo kale aad u shaqeynaya. Meesha la ballaariyey waxay leedahay qafis dhererkiisu dhan yahay 4760mm oo leh miis labis 1290mm ah. Inta udhaxeysa sariirta iyo musqusha sayidka waxaa loo qorsheeyay qol u eg 2930mmx1050mm L, kaas oo si fiican u la kulma kaydinta quruxda badan ee dharka, bacaha iyo alaabada guriga xilliyada isbedelaya.
Labada carruur ah waxay kala yihiin da 'kala duwan, sidaa darteed mid waliba wuxuu doortay midabada saxda ah iyo qalabka loogu talagalay qalabka adag iyo kuwa jilicsan, si ay u aqbali karaan ulana jaan qaadi karaan gurigooda cusub si deg deg ah.
Walaalka ka weyn waa 10 jir, qolkuna wuxuu sii ahaanayaa mid isku jira midab cad oo dhalaalaya iyo buluug isku dhafka ah, wuxuu abuurayaa dareen kala sareyn isagoo waliba ku ifaya tamar iyo male.
Walaalka ka yar waa 5 sano jir, caruurta yar yar, jilicsan, fudeyd, neefsasho iyo jawi raaxo leh ayaa siin kara iyaga dareen amni. Taasi waa sababta qolka loogu qurxiyo midab cagaaran oo jilicsan. Istiikaarrada booska 3D ee gacantooda ay sameysay milkiilaha marwada ayaa lagu dhajiyay darbiga, si adduunyada yar ee cunugu u yeesho mala awaalka cajiibka ah ee cirka.
Structure Qaab dhismeedka asalka ah ee dabaqa koowaad
Plan Qorshaha dabaqa koowaad
Structure Qaab dhismeedka asalka ah ee dabaqa labaad
Plan Qorshaha dabaqa labaad
beddel booska albaabka laga galo iyo irridda qolka labaad, oo naqshadeyso saddex meel oo lagu kaydiyo adoo isticmaalaya beddelka derbiga.
bedel booska jaranjarada qolka fadhiga hoose ka boodaya si khadka tooska ah looga dhigo mid ku habboon.
ballaadhi aagga jikada oo ballaadhi goobta balakoonka lagu nool yahay.
qolka jiifka labaad ee dabaqa labaad iyo balakoonka fadhiga ku xiga waa la isku daray oo dib loogu qaabeeyey laba qol oo caruur ah.
bedel booska albaabka qolka jiifka si aad uga dhigto qadka waxqabadku mid jilicsan oo ku dar mashiinka si loo kordhiyo aagga isticmaalka. Darbigii daraasadda waxaa loo wareejiyay 50mm si loogu isticmaalo meel lagu keydiyo, ugu dambeyntiina musqusha weyn ayaa la ballaariyay si ay ula kulanto afarta shaqooyin ee qolka qubeyska, musqusha, barkadda qubeyska iyo qubeyska si ay u noqdaan qol ballaaran.
loo beddelo dhismaha lana ballaariyo qolka daraasadda 10m².
Qaabka: Nooca guryaha oo casri ah: shan qol iyo laba hoolal
Habka adeegga: nashqadeyn buuxda + dhisme
Cinwaanka mashruuca: Chengdu. Fudi Yonghu Bay
Kooxda adeegga: Chengdu Hongfuji Design
Hore:: Qurxinta Qolka Musqusha Ee 16ka "Faahfaahinta Eebbe", Samee Wax Sax ah, Waxay Ka Dhigi Kartaa Shaqooyinka Badh Badbaadinta Next: Caqabad, Naqshadayaashu waxay gacan ka geysteen Naqshadaha Albaabka Albaabka Weyn ee yaabka leh